Ibhulogi • I-Strawberry Camera Straps
Izinto eziza kwenziwa-
F1 Uyenze njani
M1 Uthotho indlela yokwenza
I-Mini QD Loops njani-ukuya
Okungakumbi Ngezifundo Zethu
Yahlula-hlula ii-Rings njani
bonke Ngathi Izinto eziza kwenziwa- Uhlaziyo lomthengisi DIY lomhleli F1 Uyenze njani F1ultralight njani-ukuya Journal M1 Uthotho indlela yokwenza I-Mini QD Loops njani-ukuya Okungakumbi Ngezifundo Zethu Reviews Ukujonga okulula Yahlula-hlula ii-Rings njani
UBen Staley: Umdlalo wobugcisa kunye nobugcisa
U-Ben Staley ngumdlali ophumelele i-DP / Umvelisi, umfoti, onesiphiwo sokuzonwabisa (ngamanye amaxesha ukuhlawulwa, ngamanye amaxesha ukudlala). Umdlalo wobugcisa kunye nobugcisa, ishaneli entsha kaBen yeYouTube, iimpawu (njengoko unokuqikelela) uncedo ngoncedo zombini lokufota kunye nolwexeshana- iresiphi uBen ukufanelekile ukuba akhonze (wenza ifilimu ebulalayo kakhulu ngeCatch ngenxa ye-gosh). I […]
Ukutshintsha ngokukhawuleza ikhamera yakho yekhamera ye-F1 ukusuka kumtya omde wesitayile, ukuya kwisikeji-ubude entanyeni akufuneki kuchazwe. Ukuyiguqula ibe ngumtya wentambo kungabonakali ngokucacileyo - ude ubone ukuba kulula kangakanani! Sukukhathazeka ngokufumana ipopepe, kuba le yeyona vidiyo imfutshane kwimbali yoluntu.
UFlemming Bo Jensen uphonononge ii-F1's zakhe zokusebenza kanzima
Umsebenzisi wexesha elide Simplr uFlemming Bo Jensen uthumele uphononongo lwe-F1's, ebachaza njenge "strip yekhamera yakhe egqibeleleyo." "… Imitya elula iluphendule iminqweno yethu ngokwenza intambo ye-Simplr F1! … Sele ndisebenzisa imodeli ze-F1 ngaphezulu konyaka ngoku, kumakhulu eekonsathi kunye neminyhadala kwaye andikaze ndisebenzise […]
UBert Stephani: UFujifilm X100V “Yeyona nto ibalulekileyo”
UBert Stephani ebesebenzisa iFujifilm X100V esandula ukubhengezwa kangangeenyanga ezimbini ngoku, esenza imifanekiso emihle efihlakeleyo. Kule vidiyo ivela kwiFujifilm, eyinxalenye yongcelele lwazisa i-X100V, iya kubonakala njenge-Bert's M1a Mirrorless Camera Strap (kuhlelo olulinganiselweyo uCoyote Brown) sele efaka ixesha eliyimfihlo eliphezulu kunye nale eyayisakuba yimam. Ukwengeza […]
Ikhamera yePunk: Ukudala iFujifilm X-Pro3
Le mveliso ye-epic iqala ixesha leenyanga ezili-18 ezikhokelela ekukhulisweni kweFujifilm X-Pro3. Ifilimu ayijongi nje kumbono, uyilo, kunye nenkqubo yokwenza (kunye nabayili boyilo, zipholile huh?) - kodwa ikwayi "ntsapho" enobungqina yeeNxusa zaseFujifilm-apho kuye kwenziwa khona le khamera. Kwi […]
Ngoku iyafumaneka eRigu, e-UK
Isekwe kwi-Lake District yase-England, i-Rigu ithwala ukhetho olukhulu lwezinto zekhamera, kugxilwe kwimitya yekhamera kunye neengxowa. Ngoku bathwele uninzi lweekhamera zethu… iindaba ezimnandi zabahlobo bethu base-UK! Jonga 'ukuphuma ku-http: //rigu.co.uk
UMindy Tan yincwadi eneetalente ekhethekileyo kunye nomfoti wezitalato, kunye no-Fujifilm Ambadors. Kwinqaku leFuji Girl, uMindy uthetha ngegiya, ubuchule, kunye nento ayijongayo kwizifundo zakhe. Ngokungathandabuzekiyo, ii-co-star apha ziikhamera zeFujifilm, kubandakanya i-X-T3 kunye nokukhululwa kwangaphambili (njengokwenza umboniso bhanyabhanya) kaFuji X-Pro3's-kunye ne-co-co-star (iyenza le nto […]
Emva kwe-hiatus ende evela kwi-YouTube, uBert Stephani onetalente kwaye onolwazi ukhuphe ividiyo ebonisa ngamava akhe kunye neFujifilm X-Pro3 esele ilindelwe. Ifakwe kwi-X-Pro3 ye-M1a ye-Mirrorless Camera Strap (kwindawo enqabileyo engabonwa i-coyote brown). Sinomona!
UFujifilm X-Umfaki-zithombe uCharlene Winfred ngoku usebenza eIraq, eqhubela phambili uthumo oluPhezulu loThando, ukunika uncedo kubabaleki nakwabahlali bamazwe adlakazwe yimfazwe. Nangona efanelwe yimbasa, kungabonakala ngathi ulungele iTujifilm X-Pro3. Kule posi, wabelana ngeengcinga zakhe kwikhamera, kunye nokuphefumla ngokwenyani […]
UKevin Mullins, umtshato kunye nomfoti wesitrato ogqwesileyo, utyhila iingcinga zakhe kwiFujifilm X-Pro3 elindelekileyo, athe uchithe ixesha elinemfihlo ngaphezulu. Siyavuya nje ukuba kunye nokukhwela (leyo yi-Simplr F1 eqhotyoshelwe kuyo). Unayo ividiyo kunye neposi eneenkcukacha- ke qiniseka ukuba uyaphuma […]
Isikhokelo seMelika seGear esandula ukupapasha oku: Ikhamera yeGera eyenziwe eMelika: Isalathiso kwi25 Brands Photography yaseMelika. Sikuyo, kunjalo-kwaye sinebhongo ngokuba kwinkampani yee brand ezininzi ezohlukileyo.
Ukukwazi kukaPatrick La Roque ukubona imifanekiso emihle ehleli macala onke kuyakhuthaza, ukutsho nje okuncinci. Apha, unamathela kwi-GF50mmF3.5 R LM WR yakhe ye-GFX 50R. Ukufikelela kwi-GFX 50R kuPatrick, yinto yethu ye-F1 Sling-Style Camera Strap. Mhlawumbi isuntswana italente yakhe ingadluliselwa kuthi, []
Ubuchule bukaFlemming Bo Jensen bokubamba umxhelo weekhonsathi eziphilayo ziyabini. I-Red Bull yaseburhulumenteni kunye neFijifilm X-Photographer, ukukwazi kwakhe ukuthatha "ukudubula" kubilisa ukufumana amava, ixesha, ubuchule, ukunyamekela - kwaye, ngokuqinisekileyo, iinjongo zakhe. Ufuna ukwazi ukuba kukuphi isikhwama sikaFlemming? I-Shotkit ifake kuphela i-rigund rundown nayo yonke [...]
Ukuba uqaphela iqela likaFiji lobugcisa be-X Abafoto, mhlawumbi uyazi noCharlene Winfred. Usenokuba uqhelanise noFajinon XF35mmF1.4 wakhe odibeneyo. Inamathele kuwo onke amaFiji ayenayo. Ngamaxesha amaninzi njengoko ebhaliwe malunga neengalo zakhe kunye neelensi, oku kuza kuba ngowokuqala uxoxe ngawo [...]
I-Fujicast yi-Fujifilm kunye nePhoto Podcast evezwe nguNeale James noKevin Mullins. Ukuba uthe wahlala phantsi kweliwa, uNeale noKevin bobabini abadubulayo abaqhubekayo ngokubanzi-umtshato, isitalato, i-documentary kunye nevidiyo. Ukubava bathetha ivenkile kunye nomnye, kunye neqela elithile leendwendwe eziphawulekayo, [...]
UHugo Pinho unomfanekiso-mfanekiso onobugcisa obonwabisayo ngamehlo enomdla kakhulu (jonga imifanekiso yakhe emangalisayo evela e-Angola). Njengomthengisi weempawu zeekhamera eziliqela, umnqweno kaHugo wokwenza ubomi bakhe bube lula ngokubhengeza phantsi imifanekiso yakhe yokudlala, kwakungekho msebenzi olula. Kule nqaku, ukhuluma ngesigqibo sakhe sekhamera kunye ne-lens - i-Olympus [...]
UCharlene Winfred ungumfaki wezakhono kunye nomenzi wemisebenzi. Ukuba uyayazi umsebenzi wakhe, uya kukwazi ukuba ininzi ixhomekeka kwi-Fujinon 35mm f / 1.4. Kule nqaku eFijilove.com, uCharlene uxoxa ngokulungelelaniswa kwakhe kwimiba ebanzi, okuyi-Fujinon 18mm f / 2. Jonga ngokukhawuleza loo X-T3 ekhangelekileyo kwaye uza [...]
UPatrick La Roque onetalente ezininzi wabonakala kwi-Photokina 2018 eCologne, eJamani ukuba axubushe indlela yakhe ekhethekileyo yokuthengisa iifoto. Ukuhamba kunye noPatrick kwakusisiphakamiso sakhe-kude kube yinto efihlakeleyo ye-Fujifilm GFX 50R - ehlotshiswe yimfihlo ye-Simplr F1. Enkulu "ngiyabonga" kuPatrick, kunye nentsapho yonke eyenziwa yintsapho yase-Simplr, eyayizivolontiya ukuvavanya izinto zethu - [...]
Lapha kwi-Simplr HQ, ngokubanzi sinabantu abahlaseli bakaFijifilm-ke kuyavuya ukuba enye yeemveliso zethu zihlaziywe kwi-fujixpassion.com. Nantsi ingongoma yokuhlolwa kwayo kweF1: "Yonke into kule ngxube icingelwa kwaye yenzelwe umsebenzisi. Ufezekisa umsebenzi walo, ukhululekile, ukhululekile kwaye uhlala uhlala njalo. ... Kulula ukuyisebenzisa kwaye [...]
UCharlene Winfred ungumfoto we-nomad, i-videographer, umbhali, u-Fujifilm X-series-ambassador kunye nesiqingatha seqela lokuvelisa i-Frame Frame. Njengomnye wabalingisi bezithombe bokuqala abazinikele ngokuzithandela ukuvavanya izinto zethu, usebenzisa i-Simplr intsimbi kwintsimi ixesha elide - ngoko akumangalisi ukuba [...]
Ividiyo ye-GFX 50R iFijifilm esanda kukhululwa iqukethe amagama ayingoma kunye nekiso kaPatrick La Roque, kwaye ukuba ukhangele ngokukhawuleza, i-mount fugNet F1 (kwi-khaki yempi). Kufanelekile ukukhankanya ukuba, ngokungafani ne-GFX 50S esebenzisa i-Hasselblad-style-strap connectors, i-stylefinder-style GFX 50R isetyenziselwa umthamo oqhelekileyo!
Uhambo lwe-Fuji ne-Feelings Fuential
Ekubeni ndiyakhumbula, ubaba wathatha iifoto. Akunjalo nje kuphela intsapho enqabileyo-ehamba kwiiklasi zokufotela kwiikholeji zasekuhlaleni, ukuphuhlisa nokunyathelisa imifanekiso enobugcisa. Wayenayo into endiyicinga ukuba yiGAF L-CM ekuqaleni (ndiyazi kuphela oko kuba ibonakala kwi-mirror self-portraits), kwaye ngexesha elithile [...]
I-ThePhoblographer.com ipapasha itoni yomxholo omkhulu kubalingisi beefoto abazama ukuphakamisa ubugcisa babo, okanye baqhubele phambili kunye neyona ndlela yakutsha kunye neyona nto inkulu kakhulu yokuthambisa imifanekiso. Sisoloko sivuya kakhulu xa zibonisa izinto zethu zakutshanje - njengangoku i-F1 yeSling-Style Strap Strap. Funda inqaku elipheleleyo apha.
Faka intaba yeFlat F1
I-F1 yakho entsha iya kuba mnandi ngakumbi ukuyisebenzisa ukuba "yenza ikhefu" ngokukhawuleza ngaphambi kokuyifaka kwikhamera yakho. Lungisa iqhina ukusuka kubuncinci ukuya kobude obude malunga namaxesha angamashumi amabini, ngokubamba isiphelo kunye nokudonsa kwithebhu yokulungelelanisa. Inguqulelo yentaba elucaba yekhareji yethu ye-F1 yokufakelwa okufanayo kwi […]
Ukunyamekela & Ukondla kwe-Simplr Strap yakho
Kungekudala, omnye wabathengi bethu ubuye kwi-weekjournalism yesabelo kwi-ship cargo ship, waza wabuza indlela yokucoca i-strap simplr engcolileyo. Akukho mfuneko yokuyifana nayo - kuba i-strap yakho ye-Simplr ayiyiki into ekhoyo. Yiphosa nje kwisitya samanzi ashisayo kunye nendawo yokuhlamba elincinci [...]
Asizange senze imfihlo yokuba, nangona iingubo zethu zisebenza kakuhle kuzo zonke iikhamera ezingenakubukrabhu, sinokubambisana ngokukhethekileyo kweekhamera ze-Fujifilm. Ngoko, savuya gqitha ukuba sihlolwe yi-fujixpassion.com. Nantsi i-snippet: "Ngokukhawuleza ukuba ndikhuphe i-M1a i-Mirrorless Strap Camera kwiphakheji, into yokuqala [...]
Ukuhambelana nokukhululwa kwe-X-H1 entsha ye-Fujifilm, uPalle Schultz uxoxa ngeekhamera zamandla kwizinto zombini nezobugcisa - njengokuba iPalele kuphela. Unokuthi uqaphele intsimbi kaPalle oyikhethayo - yethu ye-M1a i-Mirrorless Strap Camera (kwi-Castor Grey)! U-Palle Schultz ungumfoto wezithombe kunye nombonisi wevidiyo oseDenmark, [...]
I-Simplr M1a I-Mirrorless Strap Strap ibizwa ngokuba yi-Shotkit ye-2018 Best Camera Straps uluhlu: "Ngabakhi beenkampu ezininzi abazama ukuguqula umgca wekhamera othobekileyo kunye nokongezwa kwezixhobo zobuqhetseba kunye ne-gizmos, kuyavuya ukubona ezinye iimpawu ezizama ukugqibelela into esele sinayo ngokugcina izinto zilula. Ngokufanelekileyo [...]
UFlemming Bo Jensen ungumfaki-mculo womculo ... Ngokukodwa, uyaziwa ngenxa yokungakwazi kwakhe ukumbamba i-concertgoer kwiindawo ezikhoyo zomculo. Kungakhathaliseki ukuba mncinci, omkhulu, omhle okanye onxakekisayo - uFlemming uyayichitha ibe yimifanekiso emihle. I-Flemming ihlaziya i-KXMUMXa ikhamera yeekhamera: Into endiyithandayo nge-Simplr M1a strap ... Le [...]
I-talented Kevin Mullins esuka kwi-f16.click ikhuphe ividiyo entsha kunye neengcamango zayo kwi-X-Pro2 firmware i-4.0 update, kubandakanywa izixhobo ezintsha zevidiyo. Uthetha ngeziganeko ezintsha ze-X100F (kwaye sitshitshisile ikhenkethi yakhe ethandayo kunye ne-M1a).
I-Fujifilm Global ikhuphe le vidiyo equkethe iComputer Framework yeDooding Winner yeCharlene Winfred kunye neFlemming Bo Jensen-kunye ne-X-T2 ye-X-T2 yabo. Kuyinto eyonwabisayo kodwa isiqwenga sokufundisa esithetha ngokungafani phakathi kwezi khamera ezimbini, kunye nabafaki beefoto abasebenzisayo. Jonga ngokukhawuleza kwaye uya kubona ukuba bobabini bakhetha ikhamera efanayo yekhamera [...]
UCharlene Winfred ungumfoto we-nomad, i-videographer, umbhali, u-Fujifilm X-series-ambassador kunye nesiqingatha seqela lokuvelisa i-Frame Frame. Indlela kaCharlene yokusetyenziswa kwezixhobo isichaza into esiyiyo apha e-Simplr: Akukho mva. Akukho mbambano. Izinto zimele zisebenze, zisebenze kakuhle, kwaye ziqhubeke zisebenza ... ngaphandle kwengqiqo enkulu. Waze wenyuka kunye [...]
Yibusise Le ngxowa yecala yonke into eyenziwa ngumntu. Ngokomzekelo, okwangoku i-M1a i-Mirrorless Camera Strap ijikelezwe yiDucati Panigale V4, uhlobo oluthile lomenzi wekhofi olunamandla kunye ne-1965 Porsche 356. "Ukuba ufuna inkampu entsha yekhamera esebenzayo kunye nesitayela ngaphandle kokuphula iibhanki, khangela [...]
Ngokuqhelekileyo ufunda ukuhlaziywa okuqala ngegama elithi "fugly" ... kwaye uqukumbele ngale ndlela: "Ngokomsebenzi, i-Simplr M1a i-Mirrorless Camera Strap kufuneka ibe enye yezona zinto zihamba phambili kwi-market makhamera aseMelika. Ndiyamangaliswa nangona indlela elula kwaye ekhohlisa ngayo ibonakala. Ngaba [...]
UKevin Mullins ungumfoto we-UK womtshato ohlonishwa kakhulu. Ukongeza kwipolfoliyo yakhe yomtshato yecandelo elimangalisayo, uphinde ugijime indawo eyaziwayo yeF16.click, eyazinikela emsebenzini wakhe kunye nazo zonke izinto zikaFuji. U-Kevin usanda kuthumela iingcamango zakhe kwi-Fujifilm X-E3 ... kwaye siyavuya ukubika ukuba idibene kakuhle nge-Simplr M1a [...]
U-Palle Schultz ungumfoto wezithombe kunye ne-videographer eseDenmark, kunye ne-Fujifilm X-photographer esemthethweni. Kule vidiyo iingxoxo zePalle malunga nevidyo yakhe yevidyo yevidiyo ... kuquka i-Fujifilm XT-2, kunye ne-enclr M1a ikhamera yekhamera, yokuzinzisa kunye ne-inshurensi ngamaconsi angengozi. "Ndiyathanda kakhulu kuba kulula ukukhupha, kunye neziphelo [...]
UBert Stephani ubeka iingcamango zakhe kwi-M1a I-Mirrorless Strap Camera, kunye nemifanekiso emihle kakhulu. Ungumfoto wezentengiso waseBelgium kunye nomhleli we-photographer, isikhulu se-Fujifilm X-photographer, kunye nelungu le-KAGE Collective-iqela lamazwe ngamazwe ababukeli bebali. "Ndiye ndikhangela ibhande elitsha lekhamera elisebenza kunye nelesimangalisa ngaphandle kokuphula [...]
I-Swiss Train Intercom
Kwiminyaka emva, ndaqala ukuhamba ngeveki e-Switzerland. Ukulindela kwam kukuba ndiza kubona iintaba ezininzi, amadlelo amakhulu aluhlaza, iibhokhwe kunye neentsimbi, kunye nezindlu eziqhelekileyo zaseSwitzerland. Into engingazange ndiyiqonde, yayingakanani ubungqangi obuyijikeleza phantse zonke iinkalo zenkcubeko yaseSwitzerland. Ngoku, akukho mfihlo uSwitzerland ayibambe ngayo [...]
Yilokho esikwenzayo ngokuzonwabisa xa sijikeleze iofisi. Nantsi iM1a elula kunye ne-35lbs (phantse i-16 kilos) ixhomeke kuyo. Kwaye oko kukhonkco omnye ... Khumbula ukuba uya kuba neenkcukacha ezimbini kwikhamera yakho. Asiyi kucetyiswa ukuba sithwale ikhamera ye35lb / lense kwi-strap, kodwa xa unesigxina se-2.5lb, [...]
I-DIY Paracord Ikhamera yesiKhontsho seNkcazo kunye nemiyalelo
(Sithumele le projekthi ye-DIY iinyanga ezili-7 ngaphambi kokukhishwa kwe-M1w Wrist Strap yethu. Nangona sikholelwa ukuba i-M1w ibonisa umgca we-strawight, e-functional strap, isicwangciso esilungileyo kunoma ubani ofuna i-nice, umxube bangenza ngaphandle kokuthunga okanye ukufumana izinto ezinzima.) Ngoko [...]
Isingeniso kwi-Mini QD Loops ™
I-Quick-connectors esisebenzisayo kwiM1a kunye ne-M1w iingubo ziyi-Op / Tech i-USA Mini QD Loops ™ (Iza kwiinguqulelo ze-1mm ne-1.5mm, kodwa sisebenzisa kuphela i-1.5mm version). Sivame ukucelwa ukuba zikhulule ngengozi. Sivuyayo ukubika, asizange sibone okanye sive oko kwenzeka. Ukuze uzikhulule, kufuneka ufake isicelo esikhulu [...]
Xa ndifumene ikhamera engenakuzibonakalisa, ndandonwabile kakhulu ukuba ndixake i-DSLR yam. Ngelokuqala ngqa kwiminyaka, ndinekhamera enobungakanani obuphezulu kunye nomgangatho wobugcisa bokwenene-kwaye ndandivuyiswa ukulibhangqa kunye neqhosha elifanelekileyo lokunene. Iminyaka eyi-30 ngaphambili, xa "ndiboleke" ikhamera yam, [...]